China N'èzí mara mma mmiri ozuzo poncho maka ụmụaka USD1.1-USD1.8 Manufacturer and Supplier | Ruo mgbe ebighi ebi
Ezubere poncho mmiri ozuzo a maka ụmụaka, ọ nwere ụkpụrụ mara mma na agba agba, na-adọrọ mmasị ma mara mma. Ejiri PVC dị elu mee ya, ọ bụ akụ na ụba mana enweghị mmiri, na-adịgide adịgide ma na-ebugharị. Ọ bara uru ịzụta.
Mere nke dị elu PVC ihe onwunwe, akpụkpọ-enyi na enyi na ọ dịghị mfe kewaa, eyi na-eguzogide ọgwụ na inogide iji.
Fechaa na obere, nwere ike apịaji ke obere size.
Ọdịdị katuun mara mma nke nwere agba na-enwu gbaa, mee ka nwa gị mara mma karịa.
Aha ngwaahịa PVCmụaka PVC curved poncho
Ibu ibu 200g
Agba Yello, Red, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ahaziri
Akara Akara ahaziri ahaziri mbanye anabata
.Dị Akwa mmiri ozuzo
Nha 82 * 56cm ma ọ bụ na arịrịọ omenala
Mbukota 1 PC / opp akpa, 50pcs / katọn
Oge nlele 7-10ụbọchị
Njirimara Ezigbo enyi na enyi
Nke gara aga: Rainmụaka Raincoat nwere mkpuchi USD1.1-USD2.3
Osote: Mgbidi Polyester Rain poncho nwere mkpuchi USD5.3-USD9.9
1.Q: Ebee ka ụlọ ọrụ gị dị? Enwere m ike ịga ebe a?
Azịza: anyị factory emi odude ke Shijiazhuang City, Hebei n'ógbè, China. Nabata ileta anyị.
2.Q: Gịnị bụ MOQ?
A: Anyị MOQ bụ 2000pcs / agba. Ọ bụrụ na enwere agba, a na-anakwere obere MOQ.
3.Q: Enwere m ike ịjụ otu sample tupu ebe iji?
A: Ee, anyị nwere ike izipu gị nnwale n'efu, mana onye ahịa chọrọ ịkwụ ụgwọ ụgwọ nke ngwa ahịa, dịka DHL, TNT, FEDEX, UPS wdg.
4.Q: you nwere ike ịme akara ahaziri iche?
A: Ee, anyị nwere ike ịme akara ahaziri iche ma soro nka gị.
5.Q: Kedu maka ọnụahịa ahụ?
A: Anyị anọwo na -emepụta ma na-ebupụ akwa mkpuchi mmiri maka ihe dị ka afọ iri na ise; Anyị nwere ọtụtụ oke na ọnụahịa bụ asọmpi. Ọnụ ego dị site na 0.12usd ruo 15usd / iberibe dịka ihe dị iche na imewe.
6.Q: Gini bu ugwo gi? Kedụ ka anyị ga-esi akwụ gị ụgwọ?
A: Anyị nwere ike ịnabata T / T, L / C, Western Union, Escrow ugwo, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọzọ ị chọrọ ịkwụ ụgwọ, biko hapụ ozi maka ịkpọtụrụ anyị.
7.Q: Kedu maka agba?
Azịza: agba mgbe nile nke ngwaahịa na-ahọrọ bụ Red, Yellow, Blue, Pink na Piel… Pantone agba nwere ike họrọ ma ọ bụrụ na nke ruru MOQ.
8.Q: Kedu maka oge nnyefe?
A: Nọmalị anyị nwere ike ịhazi iji nyefee n'ime 25-35days. Ọ dabere na nke ukwu.
9.Q: have nwere asambodo ọ bụla maka ngwaahịa ndị ị na-eme ugbu a?
A: Anyị mere ọtụtụ ule maka ngwaahịa ndị anyị na-ere ugbu a. Dị ka SGS, BV, REACH, California 65. Nyocha 6P n'efu na na. Na anyị nwere ike ime na ákwà ll dị ka gị arịrịọ, mmepụta sample nwere ike izipu maka ule tupu Mbupu.
Pvc kpuchiri ekpuchi Rain Poncho
Pvc untingchụ nta mmiri ozuzo
Uwe Pvc Rain
Emergency Portable Pee Disposable Raincoat
Omenala Waterproof breathable Unisex Rain Poncho ...
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu
Pumụaka Pu Raincoat, Peva Raincoat, Ịkwanyere Poncho, Pvc Raincoat, Comụ nwanyị na-ekpuchi mmiri ozuzo, Pu Raincoat,